HomeWararka CiyaarahaTababaraha Chelsea Thomas Tuchel oo ka Hadlay Maqnaanshiyaha Andreas Christensen ee finalka FA Cup.
Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa soo jeediyay in ka bixistii Andreas Christensen ee xilli danbe ee finalka FA Cup -ka aysan ahayn mid la yaab leh.
Christensen ayaa lagu soo waramayaa in uu ku soo bilowday kulankii Liverpool ee ka dhacay garoonka Wembley ka hor inta uuna la hadlin Tuchel subaxii ciyaarta, isaga oo u sheegay tababaraha Blues in uu dareemayo in uuna ciyaari karin.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Denmark, ayaa la filayaa inuu beeca xorta ah ugu biiro Barcelona xagaaga, waxaana uu ku jiray oo uu ka maqnaa kooxda tan iyo fasaxii caalamiga ah ee bishii March.
Sababtaas awgeed, Tuchel waxa uu tilmaamay in uu kala badh filayo in arrintu ay soo ifbaxdo, sidoo kale waxa uu qiray in daafaca dhexe uu u dheelay kulankiisii ​​ugu dambeeyey ee kooxda.
Isagoo la hadlayay suxufiyiinta shir jaraa’id, Tuchel wuxuu yiri: “Weli ma hubo inuu ku lug leeyahay berri iyo dhammaadka usbuuca.
Andreas wuxuu yimid subixii ciyaarta, wuxuuna ii sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu ciyaaro kulanka, wuxuu lahaa sababihiisa, waxay ahaayeen kuwo sir ah oo qarsoodi ah, laakiin ma ahan markii ugu horeysay sida aad arki karto toddobaadyadii ugu dambeeyay ee aan helnay qaar ka mid ah. isla xaaladaha sababta uu u ciyaari waayay si joogto ah.
“Waxaan ku fikirnay inaan ku jirno horumar wanaagsan iyo horumar wanaagsan, sababtoo ah aad ayuu u ciyaaray ciyaartii ka hor finalkii Leeds, laakiin wadahadalku wuu dhacay, waana inaan ixtiraamnaa, dabcan waanu ixtiraamnay, taageerana wuu haystaa.
“Sanaad uma badna usbuuca dhammaadka, waxay ahayd ogeysiis aad u gaaban ka hor finalka koobka iyo kulamadii kale ee toddobaadyadii ka hor. Markaa wax fursad ah uma hayo wax saadaal ah berri iyo sabtida.”
Halka 26 jirkaan uu saftay guud ahaan 33 kulan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, waxa uu saftay kaliya hal kulan lixdii kulan ee ugu danbeysay.